चट्टयाङ लागेर डडेल्धुरामा १३ जना घाइते, २ को अवस्था गम्भीर ! – RadioMBC
Home > समाचार > चट्टयाङ लागेर डडेल्धुरामा १३ जना घाइते, २ को अवस्था गम्भीर !
११ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार ०८:४६
११ जेठ, डडेल्धुरा । जिल्लाको भित्री प्रदेश क्षेत्रमा पर्ने परशुराम नगरपालिका–६, छेलाका २ वटा घरमा बिहीबार साँझ परेका चट्टयाङ लागेर १३ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये २ को अवस्था गम्भीर छ ।
घाइते ६ जनाको अवस्था समान्य रहेको भए पनि बेलादेवी धामी र मायादेवि धामीको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रराज जोशीले जानकारी दिए । गम्भीर घाइते दुई जनालाई एम्बुलेन्समार्फत जोगबुडा अस्पतालमा ल्याइएको उनले बताए ।
यस्तै परशुराम नगरपालिका ७ सादनीमा चट्टयाङ लागेर ५ जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेहरुमा १४ वर्षीय धनराज भट्ट, ५० वर्षीय रत्नादेवी भट्ट, १३ वर्षीय हरिश भट्ट, ४५ वर्षीय जनकराज भट्ट र १७ वर्षीय लक्ष्मी भट्ट रहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक जोशीले बताए ।